Isixhobo sewebhu se-generic ukupapashwa kwegraphic cartography kamasipala - ii-Geofumadas
Isixhobo sewebhu seGeneric ukupapashwa kwegraphic cartography
NgoSeptemba, 2009 Geospatial - GIS, egeomates My
Lo ngumsebenzi omhle nguMiguel Álvarez Úbeda, njengeprojekthi yokugqibela kwipyunivesithi yaseLa Coruña.
Injongo yale projekthi yenzelwe ukucebisa isisombululo koomasipala kunye noomasipala, apho banokukwenza khona ukugcinwa, ukuphathwa nokupapashwa kolwazi lwe-cartographic kunye nokuba (kungekhona imephu) enokuthi ibe nekhonkco lendawo. Indlela yokusebenzisa isofthiwe ekhululekile ibonakalisiwe, ebonakala ngathi inxaxheba ebalulekileyo, inomdla wokuhlalutya kwezoqoqosho ukucima ukuba ukungathandabuzeki ukuba ukwenza le software ngefestile kuyimali.
Akukho nto eseleyo yokudumisa lo msi, ongabandakanyi kuphela ukuhamba, kodwa umqondiso wokuphunyezwa kwawo kunye nenkcazo yemigaqo eqingqileyo abaninzi abanokuyihoxisa phambi kwenkinga enzima. Konke oku kuye kwaba eyenziwa phantsi kwelayisenisi yeGPL, kwaye iquka:
Inkcazo yePowerpoint. Ukulungele ukudala ingcamango jikelele ngokubanzi kwiprojekthi
Imemori. Amaphepha e-238 achaza izinto eziphathekayo ezinxulumene neenkqubo zenkcazelo yoluntu, izicelo ezifanayo kunye nomzekelo weziphathamandla zikamasipala kwi-content content management, ngoko ke inkqubo yeprojekthi jikelele ngokucwangcisa ukuphunyezwa nokuhlolwa kovavanyo. Incwadana yomsebenzisi kunye neepatheni zokudibanisa zikwafumaneka apha.
Siyavuyisana nenkqubo yokwabelana ngalo mzamo, owenzela abasebenzisi abatsha kweso sifundo ukuba baqonde ngokucacileyo ukuba yintoni indima eyahlukileyo ekushicileleni kwimixholo yewebhu, kwaye kunye neengcali ngumqulu wokuqokelela oza kuthunyelwa ngokukhawuleza okanye kamva .
Apha no ku khuphela kulo mxholo
Post edlulileyo«Edlulileyo Allallsoft, khuphela iimephu ezivela kwiGoogle, Yahoo, Bing kunye ne-OSM
Post Next Abafana abafuna ukuhlala ...Okulandelayo "